QM oo ka digtay khatarta abaaraha ka jira SomaliaXilli ay kasii darayso xaaladda abaareed ee ka jirta dalka Somalia, ayaa waxaa kordhaha baaqyada ay dirayaan ururada caalamiga ah kuwaasoo sheegaya in xaaladda dadka halis gali karto hadii aan lala gaarin gurmad deg deg ah. Hay’addaha Qaramada Midoobey ee UNICEF iyo WFP ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in abaartan isu badali karto macaluul baahsan oo ka dillaacda waddanka taasoo ay adkaan karto in wax laga qabto iyagoo codsaday in loo gurmado. Hay’adahaasi ayaa sidoo kale sheegay inta badan dadka Soomaaliyeed ay saameysay abaarta, islamarkaana ay la il daran yihiin cunto yari iyo Biyo la’aan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu dalbaday malaayiin Dollar oo lagu caawinayo dadkaas iyagoo sheegay in gurmad deg deg ah loo baahanyahay | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso QM oo ka digtay khatarta abaaraha ka jira SomaliaXilli ay kasii darayso...
QM oo ka digtay khatarta abaaraha ka jira SomaliaXilli ay kasii darayso xaaladda abaareed ee ka jirta dalka Somalia, ayaa waxaa kordhaha baaqyada ay dirayaan ururada caalamiga ah kuwaasoo sheegaya in xaaladda dadka halis gali karto hadii aan lala gaarin gurmad deg deg ah. Hay’addaha Qaramada Midoobey ee UNICEF iyo WFP ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in abaartan isu badali karto macaluul baahsan oo ka dillaacda waddanka taasoo ay adkaan karto in wax laga qabto iyagoo codsaday in loo gurmado. Hay’adahaasi ayaa sidoo kale sheegay inta badan dadka Soomaaliyeed ay saameysay abaarta, islamarkaana ay la il daran yihiin cunto yari iyo Biyo la’aan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu dalbaday malaayiin Dollar oo lagu caawinayo dadkaas iyagoo sheegay in gurmad deg deg ah loo baahanyahay
Xilli ay kasii darayso xaaladda abaareed ee ka jirta dalka Somalia, ayaa waxaa kordhaha baaqyada ay dirayaan ururada caalamiga ah kuwaasoo sheegaya in xaaladda dadka halis gali karto hadii aan lala gaarin gurmad deg deg ah.
Hay’addaha Qaramada Midoobey ee UNICEF iyo WFP ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in abaartan isu badali karto macaluul baahsan oo ka dillaacda waddanka taasoo ay adkaan karto in wax laga qabto iyagoo codsaday in loo gurmado.
Hay’adahaasi ayaa sidoo kale sheegay inta badan dadka Soomaaliyeed ay saameysay abaarta, islamarkaana ay la il daran yihiin cunto yari iyo Biyo la’aan.
Warbixintan ayaa sidoo kale lagu dalbaday malaayiin Dollar oo lagu caawinayo dadkaas iyagoo sheegay in gurmad deg deg ah loo baahanyahay
“Waxaa aad noo walwal gelinaaya waa cabsi xoog leh oo aan ka qabno in xaaladdu ay si degdeg ah u sii xumaato, tiro dadka gurmadka u baahan ay khatarta wajahayaan, in gurmad caafimaad iyo mid cunto ahba lala gaaro dadkaa dhibaateysan waxaana codsaneynaa in dalalka Caalamka ay wax ka qabtaan arintaasi ,” Ayaa lagu yiri warbixinta hay’adaha Qaramada midoobey.
Baaqan ayaa qayb ka ah kuwo horay ay usoo saartay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa inkastoo ilaa hadda aysan jirin cid ka jawaabtay
This post has already been read 35724
Previous articlePuntland: Guddoomiyihii gobolka Sool oo shil-gaari ku geeriyooday
Next articleBAKOOL: Ku dhawaad 30 ruux oo Gaajo iyo Haraad u geeriyooday